Ny valan'ny COVID-19: Vokatry ny doka sy ny varotra | Martech Zone
Ny valan'ny COVID-19: fiantraikany amin'ny dokambarotra sy ny marketing
Alatsinainy Martsa 30, 2020 Alatsinainy Martsa 30, 2020 Kati Taylor
Tena sarobidy tokoa ny miara-miasa amin'ny masoivoho iray izay eo an-tampon'ny fanavaozana ny marketing zava-dehibe amin'ny fotoana rehetra. Satria ny orinasa rehetra dia terena hanao fanovana noho ny toe-javatra misy ankehitriny sy ny fahasalamana sy ny fiarovana COVID-19, dia midika izany fa manome teknolojia ampy ho an'ny mpiasa an-tany lavitra, mifindra any amin'ny serivisy fifandraisana zero raha azo atao, ary manenjana ny volan'ny orinasa.
Ny toerana handaniana dolara amin'ny marketing dia zava-dehibe mandritra ireo fotoana ireo. Ny orinasa dia tsy maintsy mamorona famoronana mba hijanonana ho manan-danja ary hanohy hanolotra vokatra sy serivisy ilaina. Ny fahasalamana sy ny fiarovana, mba tsy hampiharihary olona bebe kokoa sy hampihenana ny fihanaky ny viriosy, dia lasa fangatahana vaovao. Misy teboka roa izay hataonay momba ny loharanom-pahalalana azo alaina.
Fanavaozana lehibe ho an'ny kaonty Google Ads
Misy ny doka ho an'ny orinasa Google Ads kely sy salantsalany ho avy tsy ho ela! Google dia nilaza fa te hanampy amin'ny fanalefahana ny vola lany amin'ny orinasa kely sy salantsalany (SMB) izy ireo hifandray amin'ireo mpanjifany mandritra io fotoana sarotra io. Izany no antony anomezan'izy ireo $ 340 tapitrisa doka ho an'ny SMBs eran-tany, izay azo ampiasaina amin'ny fotoana rehetra hatramin'ny faran'ny taona 2020 manerana ny sehatra Google Ads. Ity dia fanamaivanana kely ho an'ireo orinasa izay efa nanao marketing tamin'ny mpijery mangatsiaka niaraka tamin'ny Google Ads. Ireo SMB izay mpanao dokambarotra mavitrika hatramin'ny fiandohan'ny taona 2019 dia hahita fampandrenesana momba ny trosa hita ao amin'ny kaonty Google Ads -ny ato anatin'ny volana vitsivitsy.
Fanamarihana: hampandrenesina ireo mpanao dokam-barotra mandray ny doka.
Eo am-pamolavolana ireo mari-pahaizana manokana ao amin'ny kaonty Google Ads i Google, noho izany dia tsy hiseho avy hatrany ny fampandrenesana. Miaraha miasa amin'ny ekipa marketing nomerika anao hijerena ireo mari-pankasitrahana ireo ary manomboka manamboatra tetikady amin'ny fomba tsara indrindra hampiasana azy ireo!
Ary koa, ankoatry ny marketing maimaim-poana avy amin'i Google na ny ady hevitra taloha momba ny na hanao doka Google na doka Facebook marihinay fa mifindra amin'ny doka Facebook ny olona mandritra io fotoana io.
Mihodina amin'ny doka Facebook ny orinasa
Satria mijanona ao an-trano daholo isika, betsaka ny olona mandany fotoana amin'ny media sosialy ka tsy misy dikany ny tian'ny orinasa hamidy any bebe kokoa. Miaraka amin'ny mombamomba 2.5 miliara ao amin'ny Facebook, ny fanamafisana na ny fanitarana ireo mpihaino doka Facebook araka izany dia hahazo avo lenta kokoa. Orinasa maro no mitady serivisy amin'ny tsena izay tsy natolony teo aloha na hampahafantatra amin'ny mpanjifa ny fanovana ny fomba fanaony. Ny Ads Facebook dia fomba iray hitondrana ny mpanjifa.
Misy tara aza ny fahazoana doka amin'ny Facebook!
Omnichannel Marketing dia mijanona amin'ny fomba tsara indrindra
Tsy vahaolana voalohany velively ny fandefasana dokambarotra nomerika irery. Ohatra, orinasa maro no nampitombo ny ezaka amin'ny marketing amin'ny mailaka ary na dia manan-danja aza ny fifandraisana, mitandrema mba tsy hanandrana 'hivarotra' matetika loatra na mety hitera-doza amin'ny famoahana ny mpanatrika. Ho an'ny fahombiazan'ny marketing amin'ny mailaka dia tsy maintsy misy tetika manana lamina sy feo mavitrika hahazoana fahazoana mpamandrika vaovao. Ny fomba fanao tsara indrindra dia ny hanana drafitra ankapobeny hampiharana sy hanaraha-maso ireo lalam-barotra marobe.
Tsy misy vahaolana tokana ho an'ny marketing nomerika. Midika izany fa miavaka amin'ny anton-javatra maro toy ny indostria, toerana, mpihaino ary fotoana. Marketing Omnichannel dia ho fomba fiasa ara-pahasalamana mahasalama indrindra satria manome sary lehibe kokoa momba ny vokatra. Ny fanarahana ny angona avy amin'ny fantsona rehetra araka izay azo atao sy fahatakarana fa ny angona dia handrafitra ny fanapahan-kevitry ny orinasa mifandraika amin'ny fandaniana nomerika marketing.
Tags: Covid-19facebook adsdoka google maimaim-poanaGoogle dokadokam-barotra google
Kati dia tao amin'ny marketing nomerika nandritra ny 12 taona. Ny asany matihanina voalohany tany amin'ny oniversite dia ny fitantanana fampielezana marketing amin'ny mailaka sy tranokala mpivarotra / mpaninjara anatiny ho an'ny marika iraisam-pirenena telo lehibe. Nanomboka teo dia nandray anjara tamin'ny andraikitra mifandraika sy mandroso izy. amin'ny Vahaolana avo lenta amin'ny marketing, Kati dia tetikady ara-barotra nomerika sy mpamorona sary.
Tokony hiala amin'ny personalization ve ireo mpivarotra?
Infographic: Misy paikady vaovao hiseho amin'ny fitomboan'ny fivarotana antsinjarany amin'ny Google Ads